सुनको मूल्य अहिले सम्मकै उच्च , तोलाको कति पुग्यो हेर्नुहोस ! | Citizen FM 97.5 Mhz
सुनको मूल्य अहिले सम्मकै उच्च , तोलाको कति पुग्यो हेर्नुहोस !
७ साउन , काठमाडौँ : बुधबार एकैदिन सुनको भाउ प्रतितोला १३ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुनको भाउ तोलाको ९४ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । यसैगरी, तेजावी सुनको भाउ तोलाको ९३ हजार ५६० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक बढी मूल्य हो ।
चाँदीको भाउ पनि अहिलेसम्मकै उच्च तोलाको ११ सय ३५ रुपैयाँ पुगेको छ । मंगलबार छापावाल सुनको भाउ तोलाको ९२ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको थियो । यसैगरी, तेजावी सुनको भाउ तोलाको ९२ हजार २६० रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । चाँदीको मूल्य १ हजार ४० रुपैयाँ रहेको थियो ।
मापसे परिक्षण आजदेखि पुनः शुरु
सार्वजनिक यातायातमा महिला प्रहरीको छड्के टोली परिचालन, ५० प्रतिशत बढी यात्रु राखेको पाइए तत्काल कारबाही
उखु किसानको अझै १८ कराेड भुक्तानी गर्न बाँकी
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा आउने
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको अहिलेसम्मकै ठुलो आईपीओ आजदेखि बिक्रि खुला
अर्को इन्स्योरेन्स कम्पनीको ६६ करोडको आईपीओ आउँदै
प्रचण्डले केपी ओलीलाई भने- तपाईंलाई भित्तामा पुर्‍याइदिन…
लुम्बिनीले प्रदेश २ लाई ७७ रनले हरायो